Afo ao amin'ny tobin'ny lamasinin'i Jeddah - RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIAArabia Saodita 966Afo tao amin'ny tobin'ny lamasinin'i Jeddah
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş Arabia Saodita 966, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, VIDEO 0
Afo tao amin'ny gara
Nipoaka ny afo teo amin'ny gara tao Jeddah, Saudi Arabia.
Nisy hain-trano nitrangan'ny garan-dalamby tao Haramain tany Jeddah, Arabia Saodita. Fanambarana nataon’ny fiaramanidina sivily, fa olona dimy ireo no naratra saingy tsy fatin’ny afo.
Amin'ireo horonantsary media sosialy, setroka mainty sy angidimby miakatra avy amin'ny faritry ny garan-dalamby ao Haramain any Jeddah no hita. Asehon'ireo horonantsary an-tserasera ihany koa fa misy olona am-polony eo an-tafon'ny trano.
Ny tsipika fiaran-dalamby haingam-pandeha Haramain, izay mitentina EUR 6,7 lavitrisa (7,3 lavitrisa), nosokafana tamin'ny volana septambra. Ny tsipika ho an'ny Miozolomana dia ny mampifandray ireo tanàna masina any Mecca sy Medina mankany amin'ny tanànan'i Jeddah amin'ny fiaran-dalamby mandeha amin'ny 2018 kilometatra isan'ora (300 kilaometatra isan'ora), miaraka amin'ny fahazoana mpandeha 186 tapitrisa isan-taona.
Nisy afo lehibe nipoitra teo an-tampon ny garan-dalamby tao Al-Haramain #Jeddah, #SaudiArabia
Ireo mpamono afo dia miasa hery feno hiatrehana ny toe-javatra.
Tsy nisy ratra naratra. https://t.co/jbbwvQLomk
- مهند أبوعبيد Mohannad AbuObaid (@mohannadObaid) Septambra 29, 2019
Afo mahatsiravina ao amin'ny Train Station Yolçatı 09 / 06 / 2017 Ny araben'i Railway Yolçatı Korkutan Fire: Elazığ -Malatya ny làlambe ao amin'ny Railway State Yolçatı. Araka ny vaovao navoaka tamin'ny volana jona 6 tao amin'ny trano fanorenana trano fitobiana dia nipoaka ny antony tsy fantatrao. Vetivety dia nitombo ny afo tao amin'ny trano fanontam-pirintin'ny trano famakiam-boky ary niparitaka tany amin'ny trano fisakafoanana. Ny mpiasan'ny TCDD avy amin'ny fiompiana afo avy ao amin'ny garan'i Yolcati ao amin'ny tranobi-pampieranana dia namono haingana ny afo. Raha misy afo namono na naratra nandritra ny fanombohana ny fanadihadiana. Loharano: www.elazigsonhaber.com
Afo ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ao Ramses ao Cairo ... Farafaharatsiny 25 Dead! 27 / 02 / 2019 Nisy fiaran-dalamby iray tao amin'ny gara lehibe tao Ramses, renivohitr'i Ejipta, Cairo, nihazakazaka nankao amin'ilay sehatra mihidy, raha nihetsika haingana izy. Taorian'ny fianjerana, olona 25 farafaharatsiny no maty ary olona 50 no naratra. Araka ny loharanom-baovaona ao an-toerana, olona novonoina ny 25 ary olona 50 no naratra noho ny afo sy ny fipoahana. Ireo loharanon-kevitra ofisialin'ny isan'ny maty sy naratra dia mbola tsy tonga. Nakatona ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby tao Ramses raha nitarika fiara mpamonjy voina sy mpamono afo tany amin'ny faritra. Voalaza fa misy olona voapoizina noho ny fanoheran'ny kòno satria tsy afaka miala amin'ny fiantsonana izy ireo. Ireo loharanom-baomiera dia nilaza fa tsy misy porofo hoe niniana natao ny loza, raha toa kosa ny minisitry ny fitaterana nilaza hoe "train"
Jeddah hifandray amin'ny faritra hafa miaraka amin'ny laharan-dalamby vaovao 27 / 10 / 2014 Jeddah hifandray amin'ny faritra hafa miaraka amin'ny laharana fiarandalamby vaovao: Ny tanànan'i Jeddah ao Arabia Saodita hifandray amin'ny faritr'i Jazan, dia nekena ny seranan'i 660 kilaometatra lavitr'ezaka. Ny tetikasa namboarin'ny Fikambanana Saodiana mpitatitra dia tokony hanamafy ny fifandraisana ara-toekarena, ara-barotra ary ara-tsosialy eo amin'ny faritra roa. Araka ny tatitry ny haino aman-jery ao an-toerana dia nisy fifanarahana natao sonia niaraka tamin'ny orinasa iray mpikaroka momba ny fandaharam-pianarana. Ireo manampahefana, ny tetibolan'ny tetikasa, ny saran-dalan'ny mpandeha sy ny volan'ny entana miaraka amin'ny fanadihadiana dia nilaza fa hahatratra ny vaovao azo itokisana kokoa. Fantatray fa vita ny dingana voalohany tamin'ilay fianarana. Ny lalamby vaovao dia hanohy ny morontsiraka iraisam-pirenena ary hahatratra ny tanànan'i Cezan Economic.
Ny fizotry ny test dia natomboka tao amin'ny lalam-pifaneraserana lalovan'i Jeddah-Mecca-Medina 27 / 01 / 2017 Nanomboka ny lozam-pifaneraserana an'ny Jeddah-Medina ny fanandramana fisedrana: nanomboka ny fananganana ny 2013 ary nanomboka ny fizotry ny fiarandalamby ny lozam-pampitam-baovaon'i Jeddah-Mecca-Medina. Ny lamasinina, izay afaka maika haingana hatramin'ny 330 km isan'ora, dia hampiasaina hampihenana ny fifamoivoizana, indrindra mandritra ny fotoana fivahiniana masina. Tao amin'ny 2013 dia nitarika ny Fikambanana Saodiana Railway. Navoakan'i Cubara-navoakan'i 4 ny tetikasa lamasinina haingam-pandeha amin'i Jeddah-Mecca-Medina, izay haharitra mandritra ny taona maro sy handoavana $ 10 miliara dolara. Ny tetikasan-dalamby haingam-pandeha haingam-pandeha nataon'i Harameyn dia nomena ho an'ny consortium Saodiana-Espaniola El Shuala taorian'ny tolotra. Ny fizotry ny fizahan-toetra amin'ny seranam-piarandalamby 8 km, izay hitondra mpandeha isan'andro 160 eo anelanelan'i Jeddah - Mecca sy Medina ...
Ny mahazaka ny tanana amin'ny tranokala fanorenana dia manohina ny Jeddah High Speed ​​Station 18 / 06 / 2019 Ny tetikasan-dalamby haingam-piaramanidina Haramain (HHR), iray amin'ny fiasa lehibe indrindra amin'ny fiarandalamby ataon'ny fanjakana ao Arabia Saodita, dia nokendrena hanompo ny tontolo silamo amin'ny fanamorana ny fitsangatsanganan'ny pilgrims, ny mpitsidika Umrah ary ny olom-pirenena Saodiana. Tetikasam-pitrandrahana haingam-pandeha izay mampifandray ireo tanàna masina any Lekka sy Medina miaraka amin'ny seranan'i 450 km ary ahitana ny seranan-tsambo (Mekka, Jeddah, KAEC, Medina). Yapı Merkezi dia nanao ny fanorenana ny Medina Station tao anatin'ny tetikasa Haramain High Speed ​​Train Project ary vita tanteraka araka izay azo atao eo amin'ireo sehatra efatra. Noho ny zava-bitany tao amin'ny Station Medina, Yapı Merkezi dia nahavita ny işler
Konya Tram Map, Ora Konya Tram, Ora Anarana ary ny fandaharam-bokatra
Afo mahatsiravina ao amin'ny Train Station Yolçatı
Afo ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe ao Ramses ao Cairo ... Farafaharatsiny 25 Dead!
Jeddah hifandray amin'ny faritra hafa miaraka amin'ny laharan-dalamby vaovao
Ny mahazaka ny tanana amin'ny tranokala fanorenana dia manohina ny Jeddah High Speed ​​Station
Fanamarihana momba ny fikarakarana: Ny fametrahana ny afo sy ny fampandrenesana fanamafisam-peo dia hapetraka mba hiarovana ireo trano fialokalofana.
Fampahafantarana ny fanoloran-tena: fametrahana ny fampahafantarana ny afo detection sy ny famonoana afo famonoana afo (Sirameci Marmaray Direction Direction)
2014 - Konferansa momba ny fiarovana firehetan'ny tadio
Fampandrenesana fanehoan-kevitra: ANKARAY Fanarenana ny trano fametrahan-kitay sy ny famonoan-jiro ampiasaina any amin'ny toeram-pivarotana sy toeram-piantsonana
Fanamarihana momba ny fividianana: Fanavaozana ny fitoeran-jiro afo sy ny hosoka avy any ANKARAY